सार्वजनिक सवारीलाई दोब्बर भाडा उठाउने अधिकार दिनु, के यो सही हो ?
नेपाल सार्वजनिक सवारीलाई दोब्बर भाडा उठाउने अधिकार दिनु, के यो सही हो ?
नेपाल अनलाइन पत्रिका | काठमाडौं: लामो समयदेखि ठप्प रहेका लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी आजदेखि चल्ने भएका छन् । कोरोना महामारी सुरु भएपछि झण्डै छ महिनापछि लामो दूरीका सार्वजनिक गाडी चल्न लागेका हुन् ।
कोरोना रोकथामका लागि गत चैत ११ देखि लकडाउन भएपछि सार्वजनिक गाडी ठप्प थिए । साउन ६ देखि लकडाउन खुलेपनि लामो दूरीका सार्वजनिक गाडी चलेका थिएनन् ।
सरकारको निर्णयको यातायात व्यवसायीले स्वागत गरेका छन् । उनीहरूले आज विश्वकर्मा पूजा गरेपछि गाडी चलाउने भएका छन् ।
यातायात व्यवसायी र चालक महासंघ सम्मिलित संयुक्त कार्यदलले बुधबार विज्ञप्ति निकालेर बिहीबारदेखि बस सञ्चालन गर्न सबैलाई अनुरोध गरिसकेको छ ।
कार्यदलले बुधबार नै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलाई भेटेर असोज १ देखि गाडी चलाउन आफूहरु तयार रहेको जानकारी गराएका थिए ।
कोरोना महामारीबीच पनि जनजीवन सामान्य बनाउन सरकारले भीड हुने क्षेत्रबाहेक अरू क्षेत्रमा खुकुलो बनाएको छ । गाडी चल्ने भएपछि बुधबारदेखि नयाँ बसपार्कमा चहलपहल बढेको थियो ।
सरकारले कोरोनाबाट जोगिन उच्च सावधानी अपनाएर र स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गरेर गाडी चलाउन तथा अन्य व्यवसाय गर्न अपिल गरेको छ ।
दशैंको मुखमा सार्वजनिक सवारी चल्ने कुराले आम मानिसलाई खुशी बनाएपनि यातायात व्यवसायीलाई भाडामा दोब्बर असुल्ने अधिकार दिएर एकसाथ दुखी बनाएको गुनासो पनि भैरहेको छ ।
लामो दूरीको गाडीमा यात्राका लागि विशेष सुरक्षाको मापदण्ड बनाएर लागू गर्नुपर्ने यातायात क्षेत्रका जानकारहरुले बताएका छन् । यातायात क्षेत्रका जानकार आशिष गजुरेलका अनुसार लामो दूरीको यात्रा १०-१५ घण्टाभन्दा बढी हुन सक्ने भएकाले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिने सम्भावना बढी हुने हुँदा यसतर्फ सजक हुन जरुरी छ ।
लामो दूरीका सार्वजनिक गाडीमा आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड र यातायात सञ्चालन कार्यविधि छलफलको क्रममा रहेको छ । बिहीबारदेखि गाडी चलाउन सकिने र गाडी सञ्चालनका लागि मापदण्ड बनाउने विषयमा छलफल चलिरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । छलफलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवसायी र मजदुर संगठनमा प्रतिनिधि सहभागी छन् ।